ESI GBANYỤỌ IPHONE N'ENWEGHỊ BỌTỊNỤ - IOS - 2019
Esi gbanyụọ iPhone n'enweghị bọtịnụ ike
Iji gbanyụọ iPhone na ikpe ahụ na-enye bọtịnụ anụ ahụ "Ike". Otú ọ dị, taa, anyị ga-atụle ọnọdụ mgbe ịkwesịrị ịgbanye smartphone n'enweghị enyemaka ya.
Tụgharịa iPhone n'enweghị bọtịnụ "Ike"
N'ụzọ dị mwute, igodo anụ ahụ dị na ahụ na-abụkarị ihe nkwụsị. Ọbụna ma ọ bụrụ na bọtịnụ ike adịghị arụ ọrụ, ịnwere ike ịkwụsị ekwentị kpam kpam site na iji ụzọ abụọ.
Usoro 1: Ntọala Ntọala
Mepee ntọala nke iPhone wee gaa "Isi ihe".
Na ngwụsị nke windo ahụ meghere, kpatụ bọtịnụ ahụ "Gbanyụọ".
Swipe ihe ahụ "Gbanyụọ" site n'aka ekpe gaa n'aka nri. Oge ọzọ a ga-agbanyụọ smartphone ahụ.
Usoro 2: Batrị
Ụzọ ọzọ dị oke mfe iji gbanyụọ iPhone, nke egbu ya ga - ewe oge - bụ ichere ruo mgbe batrị ga - apụ. Mgbe ahụ, iji gbanye ngwaọrụ ahụ, ọ bụ iji jikọta chaja na ya - ngwa ngwa batrị batrịtara, ekwentị ga-amalite ozugbo.
Jiri usoro ọ bụla akọwapụtara na isiokwu ahụ iji gbanyụọ iPhone n'enweghị bọtịnụ "Ike".